That's so good, right?: February 2010
ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ပထမဦးဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အဖြစ် ဥယျာဉ်မှူးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အကူအဖြစ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဥယျာဉ်ကြီးဆိုလို့ ပန်းမျိုးစုံကို ခေတ်မှီနည်းစနစ်နဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့ခြံကျယ်ကြီးတစ်ခုကိုပြောချင်တာပါဗျ။ ဒီဥယျာဉ်ကြီးကို တောင်လှေကား မြို့လေးရဲ့ တောင်ခါးပန်းစောင်းမှာ တစ်မျှော်တစ်ခေါ်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ပန်းရောင်စုံတန်းတွေကို အကန့်လိုက်အကန့်လိုက်တန်းစီပြီးမြင် နေရတာ စိတ်ချမ်းသာဖို့ အလွန်ကောင်းပါတယ်။
ပိုင်ရှင် အန်ကယ်ကြီးက ဒီမှာအလုပ်လုပ်ရင်အောက်ခြေက စသိရမယ်၊ ပြီးတော့ ပန်းတစ်ပင်ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတာသိဖို့ ဆိုပြီး ဥယျာဉ်မှူးကြီးဆီ အပ်နှံလိုက်ပါရော။ စစချင်းတော့ ထမင်းကျွေး၊ နေစရာပေး မုန့်ဖိုးအနည်းအကျဉ်းရသပေါ့။ ဥယျာဉ်မှူးကြီးက ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးမှုအတတ်ကို ကောင်းကောင်းမောင်းတော့တာ။ အစပိုင်းမှာတော့ ပျိုးပင်လေးတွေကို ပျိုးဘောင်ကနေ ပန်းအိုးသေးသေး လေးတွေထဲ ဘယ်လိုခွဲထည့်၊ မြေဆွေးဘယ်နှစ်ဆ တစ်ခြားအရာ ကိုဘယ်နှစ်ဆထည့် စသဖြင့်လည်းပါသေး။ သဘာဝမြေဆွေးတွေပါ သလို နွားချေးတွေလည်းမြင်ရတော့ ရင်ထဲ ပျို့တောင်တက်မိပါသေးရဲ့။ ဥယျာဉ်မှူးကြီးက စေတနာပါသလို ဟောက်လည်းဟောက်ပါ တယ် သူ့စိတ်တိုင်းမကျတဲ့အခါ။ ဥယျာဉ်မှူးကြီးရဲ့တပည့်ဥယျာဉ်မှူးလေးများကလည်း ဟောက်ချင်စရာကောင်းအောင် ခိုကပ်ကြတယ် တစ်ခါတလေများ။
ထူးဆန်းတယ်လို့ပြောရင်ရသလို မထူးဆန်းဘူးလည်းပြောလို့ရတာကတော့ အလုပ်သမားအများစုက ယောက်ျားလေးတွေဖြစ်ပြီး အမျိုး သမီးများကိုတော့ ပန်းအရောင်း အဆောက်အဦးနှင့် မီးဖိုချောင်ထဲမှာပဲတွေ့ရတယ်။ အလုပ်တွင်ကျယ်တာပေါ့လို့တွေးမိရပေမဲ့ တစ်ခါ တစ်လေစိတ်ညစ်ရပါတယ်။ ယောက်ျားလေးချည်းဆိုတော့ စကားပြောတာဆိုတာ နောက်တာတွေက အတားအဆီးမရှိ၊ အနှောင့်အသွား မလွတ်တလွတ်။ အလုပ်အားချိန်ဆို ဟိုစဒီစ ကျွန်တော့်လို အနေအထိုင်အေးသူအတွက် သူတို့ကိုင်တွယ်ပွေ့ဖက်မှုကို ခံရပါသေးရဲ့။
ခပ်ဟဟ ဖွင့်ထားတဲ့အခန်းထဲ အသံပြုဝင်သွားတော့ တီဗီကို လှမ်းပိတ်လိုက်ရင်း အခန်းဝကိုလျှောက်လာတယ်။ ပြီးတော့ ခပ်သာသာ ပြုံးရင်း အခန်းတံခါးကို အသေအချာ ပိတ်လိုက်တာ။ ပြတင်းတွေကော လုံလို့ပါ။ မဟုတ်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်နေတယ်ထင်ပါ့။
မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ သူ့ပစ္စည်းကို စွဲထုတ်လိုက်ရင်း ကျွန်တော့်လျှာဖျားပေါ် ဗုံတံခေါက်ပါတော့တယ်။ ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားတဲ့ သူ့လက်အစုံ၊ တဆတ်ဆတ်တုန်လာတဲ့ သူခြေချောင်းတွေနဲ့အတူ.....အ...အား မလိုင်အပျစ်များစွာ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ အပြည့်။ အရသာ ငံသလိုလို သူ့ငပဲကိုဆက်ပြီး ကိုင်လိုက်မိပါတယ်။ သူကတော့ ဖီးလ်ပြည့်သွားရပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့ မကျေနပ်သေးဘူး ထပ်ပြီး စုပ်ချင်သေးပါရဲ့။
နေခြည်နွေးနွေးကျရောက်လာမှုကြောင့် ထရံတွေကြားက အလင်းစက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ကိုနိုးထစေပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မိသည်မသိ ကျွန်တော်အတော့်ကို လန်းဆန်းနေပါတယ်။ ကိုဖော်ဘယ်အချိန်ကများ ပြန်ရောက်ပါလိမ့် ကျွန်တော် ထချိန်မှာ ရေချိုးခန်းထဲ ရောက်နေပြီ။
Posted by Alex Aung at 8:33 PM No comments:
Posted by Alex Aung at 5:56 PM No comments:
'သူရိန် မင်းပြောနေတာအမှန်တွေဆိုရင် ဘယ်ကနေဘယ်အထိကအလိမ်အညာလဲ ပြီးတော့ ဘယ်ကနေ ဘယ်အထိက အမှန်လည်း ငါ့ကိုပြောပါ'
'မင်းလူယုတ်မာပဲ၊ အသုံးချရုံသက်သက်နဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးပြီး ငါ့ကို.....'
အတော့်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့လောကကြီးပါ၊ အချစ်ဆိုတဲ့ စကားလှိုင်လှိုင်သုံးပြီး လူတစ်ယောက်ကိုချဉ်းကပ်တယ်။ ကိုယ့်အတွက် အရာရာအဆင်ပြေပြီဆိုတော့ အမှန်တွေက ပါလာတော့တာပဲ။ ချိုသာတဲ့စကားမှာနစ်မျောမိတဲ့ကျွန်တော်ကသာ အရူးသက်သက်ဖြစ် ခဲ့ရတာ။
'တောက်!' ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်လည်းဒေါသဖြစ်မိတယ်။ ယောက်ျားခြင်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့ အပြောစကားအပေါ် အယုံလွယ်ခဲ့မိတာကို။ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးဖြစ်တဲ့ ကျော်ခေါင်ပြောတာကိုတောင် ဂရုစိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ 'မင်းက အဲဒီကောင်ကို အမ်းနေတာလားကွ၊ ဒီကောင်က ချူဆီဆိုတာ မင်းတကယ်မသိတာလား...ဟင်?'
'အစ်ကို့ကိုသတိရနေတာ၊ အစ်ကိုနဲ့တွေ့ရတာ ညီ့အတွက်အရမ်းကံကောင်းတာပဲဗျာ၊ အစ်ကို....အစ်ကို့ကို ချစ်တယ်ဗျာ.....နော်'
သွားစမ်းကွာ.....အဲဒီလိုအပျိုးလေးတွေနဲ့ ငါမျောခဲ့ရတာ မင်း flow လေးတွေကြားမှာ။ ဘာတဲ့....အချစ်ဆိုတာ အစ်ကိုနဲ့မှသိလာတာဆို လား....ဟား....ဟား။
'မင်းမရှိဘဲနဲ့...မင်းရှိမနေဘဲနဲ့ ငါမနေတတ်ဘူးဆိုတာ မသိဘူးလား?'
ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်စွာ အော်ဟစ်ပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အနီးမှာရှိတဲ့ ပန်းအိုးနဲ့ သူ့ဆီပစ်ပေါက်လိုက်တာ ခေါင်း နားက ကပ်လွဲပြီး နံရံကိုမှန်ကာ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်သွားရော။
'ဟေး...ငါ့ကောင် ရူးနေလား ကိုယ့်ကိုမှန်ရင်အကွဲပဲနော်၊ စိတ်ကိုထိန်းမှပေါ့ကွ' တဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ ကျွန်တော့်နားအသာချဉ်းကပ်ပြီး ဖျောင်းဖြပါလေ့။
အမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်တို့ ဒီလိုဖိုက်တင်ဖြစ်နေခဲ့ကြတာ ညတိုင်းလိုလိုကိုဖြစ်နေပြီ အခုတလော။ သူဘယ်တော့မှ ကျွန်တော့်ခံစားချက်ကို နားမလည်ဘူး။ သူအပြင်ထွက်ထွက်နေတာမုန်းတယ်ဆိုတာကိုရော။ အထူးသဖြင့် ညညဆိုရင် နာရီအတော်များများ အပြင်ကိုထွက်နေ တာ ကလပ်တွေ ဘားတွေဆီ။ သူအမြဲတစေ အခိုင်အမာပြောနေတာကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပျော်သွားလာ အပန်းဖြေရုံသက် သက်ပါတဲ့။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲ အမှန်လားဆိုတာကို။ ဘာကြောင့်ညညဆို အပြင်ထွက်ဖို့ဒီလောက် အားသန်နေရ တာလည်း? တစ်ယောက်တည်းအိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်စောင့်နေရတာကိုမတွေးဘူးလား? အမြဲတမ်း သူအိမ်ပြန်အလာကိုမျှော်နေ ရတာ။
သူကျွန်တော့်ဆီလှမ်းလာပြီး သူ့လက်မောင်းကြီးတွေနဲ့ ဖက်တွယ်နှစ်သိမ့်ဖို့ကြိုးစားတာမှာ သူ့လက်တွေကို ပုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်တာပေါ့။
ဘယ်လောက်ပဲဒေါဖောင်းဖောင်း နောက်ဆုံးတော့ အငိုပွဲဆင်ပြီး ရန်ပွဲကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရတာပဲ သူ့ရင်ခွင်မှာ၊ သူ့အပွေ့အဖက်မှာ။ သူ့မျက်နှာကို မော့ကြည့်မိတယ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုဝမ်းနည်းမှုအချို့နဲ့ပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မုန်းပါတယ် စိတ်တိုရင် လက်ထဲရှိတာတစ်ခု ခုနဲ့ ပစ်ပေါက်လိုက်ရမှ ကျေနပ်တတ်တာကို။ သူဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်ချစ်သူ ဟာ မူးယစ်ဆေးလိုပါပဲ ရီရီဝေေ၀နဲ့ တိမ်းမူးတက်မက်စေတာ။ သူနဲ့မခွဲနိုင်ဘူး......သူ့ရင်ခွင်ဟာ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်။
ကျွန်တော့်မျက်နှာလေးကို သူ့လက်လေးနှင့် ငြင်ငြင်သာသာဆွဲမော့စေကာ နှုတ်ခမ်းကို နုနုညံ့ညံ့အနမ်းပွင့်ခြွေ ပါတယ်။ 'ဘေဘီ....ကိုယ် တကယ်တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ၊ မင်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တကယ်မသိခဲ့ဘူး'
စိတ်ထဲထောင်းကနဲဖြစ်သွားပြီး သူ့ရင်ခွင်ကိုတွန်းဖယ်လိုက်မိပြန်ရော။ ဒီပုံပြင်တွေကြားနေရတာအမြဲလေ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ပြန်လည်ဆွဲဖက် ခြင်းကိုခံရပြီး ချော့မော့မှုလေးတွေကြားမျောရတော့တာ။
'Ok, alright!ကိုယ်မှားတာသိပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကတိပေးတယ် မင်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် ကိုယ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာ၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုလည်း မင်းကတိပေး ဒေါသထွက်တိုင်း တစ်ခုခုကို ပစ်ပေါက်ခွဲတာ အော်ဟစ်တာတွေ မလုပ်တော့ပါဘူးလို့။ ကိုယ်တို့ ခွဲနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး ပစ္စည်းတွေပဲ အလကားဖြစ်တယ်'
စကားလုံးတွေကြား ကျွန်တော့်ပါးပြင်တွေ နှုတ်ခမ်းတွေကိုနမ်းတယ်။ ပူနွေးနေတဲ့ သူ့အနမ်းကို တစ်ချက်ရှောင်လိုက်ရင်း သူ့ရင်ခွင်မှာ မှီတွယ်ခိုကပ်မိပါရဲ့။ သူ့ရင်ခွင်ထဲက ကိုယ်နံ့ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် မေ့ဆေးများလား။ ကျွန်တော် သူ့ကျောပြင်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် သိုင်းဖက်မိရပေါ့။
ကျွန်တော့်မျက်နှာကို အသာဆွဲမော့...သူ့နှုတ်ခမ်းတွေဟာ နူးညံ့စွာ.....အမှန်တကယ်နူးညံ့စွာ ထိခတ်ပါတော့တယ်။ ရင်ခွင်ထဲ ရှိန်းတိန်း ဖိန်းတိန်းနဲ့ အနမ်းဦးကိုရသည့်အလား ရင်ခုန်မိရပေါ့။ ရန်ဖြစ်ပြီးပြန်ချစ်ကြတော့ ဒီလိုပဲ ခံစားရသလားမသိ။ အိုး....ကျွန်တော့်ဗိုက်သား နှင့်ထိနေတဲ့ သူ့ငပဲဟာ တဖြည်းဖြည်းဖောင်းကြွလာတယ်။ ဂျင်းဘောင်းဘီထဲမှာ ရုန်းကန်စပြုလာပြီ။ အပြင်ကိုဖောက်ထွက်ချင်လာပြီ ထင်ပါတယ်။ မာထောင်လာတဲ့ သူ့ငပဲကို ဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ အသာဖျစ်ညှစ်လိုက်မိတော့ ကွမ်းသီးခေါင်းက တဆတ်ဆတ်ခုန်။ ဂျင်းဘောင်းဘီက ကြယ်သီးတွေကို တစ်လုံးခြင်းဖြုတ်ကာ ချွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော်ရှိရာဆီတန်းကနဲညွှန်နေရော။ ကောင်းတယ် အကြာကြီးမစောင့်ရတော့ဘူးပေါ့။
ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူး။ အဲဒါအမှန်ဘဲ။ သူကျွန်တော့်ကိုညာတယ် မချစ်ဘူး ဒါကိုကျွန်တော်သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မတွေ့ ဘဲလည်းမနေနိုင်ဘူး။ အကြောင်းတစ်ခုခုရှာပြီးတွေ့ကြမြဲ။ ရန်ဖြစ်ကြမြဲ။ ပြီးတော့ လိင်ကိစ္စကို ရှာဖွေအရသာခံမြဲပါပဲ။
ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှတွေးမထားမိတဲ့ မြကျွန်းသာရဲ့ ကားပက်ကင်မှာ ညအချိန်ကားထဲ အရှက်မရှိ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြသေးတယ်။ ပြီးတော့ အတွဲတွေသွားတတ်ကြတဲ့ နေရာမှောင်ရိပ်တွေမှာ ဆက်လက်ဖြစ်ပျက်ကြသေးတယ်။
အတွေ့ကိုမရှောင်နိုင်တာများလား၊ ဟုတ်မယ်ထင်ပါရဲ့.....သူပေးတဲ့သာယာမှုမျိုး ကျွန်တော်ဘယ်တုန်းကမှ မရဖူးဘူး။ အပွေ့အဖက်၊ အနမ်းအပြု....အို ကျွမ်းကျင်လိုက်တာ။ သူဟာ လိင်နတ်ဘုရားပါပဲ။
သူ့မိဘတွေမရှိတဲ့ တစ်ပတ်သောအချိန်လေးဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် လောကနိဗ္ဗာန်ပါ။ ဘယ်မှမသွားဘူး တစ်နေကုန် အိမ်ထဲမှာပဲ။ တစ်သက်မှာ ချစ်တဲ့သူနဲ့ တစ်မိုးအောက်နေရပြီဆိုပြီး ပျော်ခဲ့ဖူးတာပေါ့။ အစ်ကို့ကိုချစ်တယ်တဲ့....တိမ်းမူးမှုသက်သက်နဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကား လား အခုချိန်ပြန်စဉ်းစားမိရပေါ့။
'အစ်ကို့ Passwords တွေသိချင်တယ်'
လူတစ်ယောက်မှာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဆိုတာ မရှိရဘူးလား။ ရည်းစားဖြစ်ရုံနှင့် အရာရာပိုင်စိုးခွင့်ပေးရရောလား။ တစ်ကိုယ်ရေသန့် ရှင်းဖို့ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်နေတာ ၀တ်တာစားတာမှာ သူပြောသလို စဉ်းတောင်မစဉ်းစားမိဘူး။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဆိုတာရော မရှိရဘူး လား။ သူကရော သူပြောသလို စောင့်ထိန်းရဲ့လား။ ကိုယ့်ထက်ငယ်တာဆိုတော့ ကလေးဆန်သလားလို့ထင်မိပေမဲ့ စိတ်ထဲ ခုမိသားပါပဲ။
ဒါပေမဲ့လည်းလေ လမ်းခွဲဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ စေ့စပ်လက်စွပ်လိုမျိုးတစ်ယောက်တစ်ကွင်း ၀ယ်ဝတ်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ဆင်တူလက်စွပ်လေးကို သူမပေးချင်ပေးချင်နဲ့ ပြန်ပေးတယ်။ အတော်ဆိုးတဲ့ငါလို့ အပြစ်တင်ရမလားပါပဲ လမ်းခွဲတဲ့နေမှာတောင် သူနဲ့လိင်ကိစ္စပက်သက်ဖြစ် ခဲ့ပါသေးတယ်........ဟူး။
ငြင်သာစွာ သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းကိုပွတ်သပ်မိတော့ pre-cum လေးတွေလက်မှာစိုစွတ်ရတယ်။ သူ့ငပဲကို ဆုပ်ညှစ်ပစ်မိချိန်မှာ သူ့အနမ်း တွေဟာ ကျွန်တော့်လည်တိုင်၊ ပါးပြင်နှင့် နှုတ်ခမ်းအနှံ့ပြန်လည်ကျရောက်လာရော။ သူ့လျှာဖျားလေး ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ထိုးမွှေလာရင်း တစ်ခုခုကိုဖွေရှာတော့ ကျွန်တော့်လက်တွေက ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားပစ်တယ် မာသထက်မာလာအောင်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု တုန့်ပြန်မှုတွေကြောင့် ကျွန်တော့်လက်တွေကို ရပ်တန့်လိုက်တယ်။ သူ့ကိုမပြီးသေးစေချင်ဘူး။
နူးညံ့လှပတယ်လို့ သူပြောပြောနေတဲ့ ကျွန်တော့်လက်ဖ၀ါးအစုံနဲ့ သူ့ရှပ်အင်္ကျီအောက်ကို အသာလက်လျှိုလိုက်ကာ ပြေပျစ်ချောမွတ် နေတဲ့ ဗိုက်သားလေးတွေကို ပွတ်သပ်သလို ရင်ခုန်ဖွယ် အသည်းယားစေတဲ့ ရင်အုပ်အလယ်ကနေ ဆီးစပ်အထိ ဆက်နေအောင်ပေါက် နေတဲ့ မွှေးညှင်းနုလေးတွေကိုလည်း အသာပွတ်သပ်မိသည်ပေါ့။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို အသာညှစ်ညှစ်ပေးလိုက်တော့ တဖြည်းဖြည်း နဲ့မာလာတယ်။ 'အင်...ဟင့်အင်...အာ'
ကျွန်တော်တို့အနမ်းပွဲဆင်နေရင်း ကစားနေတာကိုလည်းရပ်လိုက်ကာ သူ့အင်္ကျီကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပါတယ်။ ရှပ်အင်္ကျီမရှိ ခပ်လျော့လျော့ ဘောင်းဘီနှင့် သူ့အသွင်အပြင်ဟာ အသက်ရှူမှားစေတဲ့ ကျွန်တော့်အသည်းစွဲ။
လက်အစုံကိုဘေးချကာ သူ့ကိုငေးမိနေတဲ့ ကျွန်တော့်လက်ကို အသာစွဲကိုင်ကာ အိပ်ခန်းရှိရာစီခေါ်ဆောင်ပါတော့တယ်။ သူဆွဲခေါ်ရာ နောက်ကို လှမ်းလိုက်လာရင်း ခြေလှမ်းတိုင်းတင်းကားနေတဲ့ တင်ပါးလှလှတွေကို နောက်ကနေ အသာငမ်းမိရပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက် မိတဲ့ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတိုင်းမှာ ဒီအပိုင်းကို ရင်ခုန်ရဆုံးပါ။ အစွမ်းကုန်လှပတဲ့ တင်သားဆိုင်များပေါ့။ အိပ်ခန်းထဲရောက်တော့ ခုတင်ပေါ်ကျွန်တော့်ကို တွန်းလှဲကာ အ၀တ်တွေချွတ်ပေးပါတော့တယ်။ ဂျင်းဘောင်းဘီအတွင်းက ၀တ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီတိုပါမကျန် သူဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်တာ။
ပြင်းပျတဲ့ သူ့လှုပ်ရှားတက်ကြွမှုတွေဟာ ကျွန်တော့်ကို ပိုမိုရင်ခုန်ပူနွေးစေပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းခြင်း ဂဟေဆက်ကာ ဖက်တွယ်ထားမိကြ တယ် အချိန်အတော်ကြာ။ ပြီးတော့ တစ်ခါ ကျွန်တော်တို့အကြိုက် အနေအထား ခုတင်ပေါ်လှဲလိုက်ကြတယ်။ သူ့ငပဲဟာ လုံးဝန်းရှည် လျားလှပပါတယ်။ မွှေးရနံ့သင်းနေတဲ့ သူ့ငပဲကို ကွမ်းသီးခေါင်းလေး ငုံစုပ်ပေးရာကနေ အဆုံးထိမျိုချလိုက်တာ ကျွန်တော့်နှာခေါင်းနဲ့ အမွှေးနုတစ်ချို့ပေါက်နေတဲ့ ရွှေဥတွေထိတဲ့အထိပေါ့။ သူလည်းပဲထို့အတူ အာခေါင်ထဲထိသွင်းလိုက်ရင်း လျှာနဲ့ရစ်ပတ်ကစားပေးတာ ...အာ...ဖီးလ်ပဲဗျာ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပုလွေအပြိုင်မှုတ်ကြရင်း တစ်ချက်တစ်ချက် သူ့balls တွေကို ပွတ်သပ်ပေးမိတယ်။ လုံးဝန်းကြီးမားလိုက်တာများ man juice တွေအပြည့်ထင်ပါရဲ့။ ရွှေဥတွေကို တစ်လုံးခြင်းငုံထွေးလိုက်ရင်း လျှာကစားမိတော့ အကြော တွေတင်းကနဲ တင်းကနဲဖြစ်ကာပေါက်ကွဲဖို့ အသင့်ဖြစ်ပြီ ထင်ပါရဲ့။ မာထောင်နေတဲ့ သူ့ငပဲကို စုပ်ယူနေမိတော့ သူလည်း ကျွန်တော့်ဟာ ကို မျိုချနေရာကနေ ကွမ်းသီးခေါင်းထိ ဆွဲထုတ်ပြီး ထိပ်အရေပြားကို လျှာကစားနေတာများ...လေ။
အတူတကွ စွဲလမ်းတက်မက်မှုတွေ အဆုံးစွန်ထိ ခံစားစွဲလန်းကြပြီး ခဏအကြာမှာတော့ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ဘူး ပန်း ထုတ်ချင်လာမိပြီ။ သူ့အပြုအစုက ဆရာကျတယ်မဟုတ်လား။ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို ပွတ်သပ်ပြီး ကွမ်းသီးခေါင်းကို ပလွတ်ကနဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်တာမှာ ထိန်းချုပ်မှုကင်းစွာနဲ့ သူ့ပါးစပ်ထဲအပြည့် ရွှေရည်တွေ ဖြည့်ပေးမိပါတော့တယ်။ တစ်စက်မကျန်ညှစ်ထုတ်ပြီး ချိန်မှာတော့ သူ့အလှည့်လေ။ သူကတော့ ကျွန်တော့်ခေါင်းကို အသာထိန်းကိုင်ကာ သူ့တင်ပါးတွေကိုအားယူလျက် mouth-fucking လုပ်ပါတော့တယ်။ သူ့ငပဲအသွင်းလုပ်ချိန်မှာ၊ ပြန်အထုတ်မှာ လျှာနဲ့သရပ်ပေးမိတော့ သူ့အတွက် tempo မြင့်ရသပေါ့။
တစ်ချက်တစ်ချက် သူ့ငပဲကို အာခေါင်ထဲထိ လျှောကနဲ ဖိသွင်းတတ်သေးတော့ ကျွန်တော့်မှာ အသက်ရှူမှားရသေး။ သူ့အရှိန်မြင့်လာ ချိန်မှာတော့ တစ်ဖက်သားအပေါ် သူအာရုံမစိုက်တော့ပါဘဲ ဖီးလ်အမြင့်ရဖို့သာသူလုပ်ပါတော့တယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကျွန်တော်လေ ကိုက် ပစ်ချင်မိသေးတော့။ သူ့တင်ပါးတွေအဆုံးထိတစ်ချက်ကော့အပြီးမှာတော့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ မလိုင်အဖတ်တွေ အများအပြား ခွံ့ကျွေး ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်လျှာပေါ် နှုတ်ခမ်းတွေအပေါ်မှာ သူ့အရည်တွေဖွေးနေရော။ သူ့ငပဲကို မလွှတ်ပေးဘဲ အတန်ကြာဆက်စုပ်ပေး မိရင်း တကယ်ပျော့ခွေသွားမှ လွှတ်ပေးတာပေါ့။
နှစ်ဦးသားဇာတ်လမ်းဆုံးတော့ သူကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကို သူ့နံဘေးဆွဲယူကာ လက်မောင်းထွားထွားတွေနှင့် ဖက်တွယ်ထားပါတော့ တယ်။ နောက်တော့ နူဖူးလေးတွေကို ငြင်သာစွာအနမ်းပေးသလို နှုတ်ခမ်းကိုလည်း ရွရွလေးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့လျှာတွေပေါင်းစပ်မိ ကြချိန်မှာတော့ ငန်ကျိကျိ အရသာအရည်နှစ်ခု ရောနှောပြီး ငန်ချိုချို အရည်အပျစ်တွေဖြစ်စေရော။ ခဏအကြာမှာတော့ ကျွန်တော် သူ့ရင်ခွင်မှာမှေးမှိတ်မိရပါတယ်။
'See baby? ကိုယ်တို့တွေ အဖြစ်ကိုစဉ်းစားကြည့်၊ ကိုယ်ဘယ်သူနဲ့မှ မင်းကိုမလဲနိုင်ဘူးဆိုတာ။ ပြီးတော့ နောက်တစ်ယောက်မရှိဘူး ဆိုတာလေ'
သူ့နို့သီးခေါင်းမာမာလေးတွေကို ဘာရယ်မဟုတ်ကလိမိရရင်း ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်ကာ ဟုတ်ကြောင်း သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ ရန်ဖြစ် လိုက် စိတ်တိုလိုက်နဲ့ နောက်ဆုံးအိပ်ယာပေါ်မှာပဲ အရေးအခင်းပြီးဆုံးသွားတတ်တာ စက်ဝိုင်းတစ်ခုပတ်ချာလည်သလိုဖြစ်နေပြီဆိုတာ တွေးဖြစ်ရသေးပေါ့။ အမြဲလိုလို အတူတူပဲဖြစ်စဉ်များဟာ။
နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုရင်တော့ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ဦးတည်ချက်ထားရမယ်.........။
ဦးတည်ချက် ရည်မှန်းချက်တွေနှင့်အတူပါပဲ ဦးလေးတွေရှိရာ ကနေဒါကို ကျွန်တော်သွားဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။ ရောက်စမှာ သိပ်အဆင်မပြေ ပါဘူးဗျာ။ အလုပ်ရွေးနေလို့လေ။ အခုတော့ အဆင့်မြင့်ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့ ရှေ့မျက်နှာစာမှာ Front Desk Manager ရာထူးနှင့် အဆင်ပြေချောမွေ့ခဲ့ရပေါ့။
ပိုက်ဆံတွေကို စနစ်တကျသုံး၊ အိမ်ကိုပို့၊ အားလပ်ချိန်မှာ နေရာအနှံ့ခရီးတွေထွက် ဒေသန္တရဗဟုသုတပေါ့။ ညပိုင်းအင်တာနက်သုံးရင်း တစ်ခါတလေ အိမ်ကမိသားစုနဲ့စကားပြောရ၊ မာမီနှင့် သတင်းစုံပြောကြနဲ့ အပန်းဖြေရတယ်။ သူတို့ကို ဘုရားသခင်စောင့်ရှောက်ပါ စေ.....။
ကိုယ့်စိတ်ကူးတွေ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဒီနိုင်ငံရောက်လာပေမယ့် တစ်ခါတလေတော့ မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းပါတယ်။ တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်ဆို ဒီမှာ နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ရပြီလေ။ အသက်ကြီးလာရင် ကနေဒါမှာခြောက်လ မြန်မာပြည်ခဏ တစ်လှည့်စီနေမလားလို့ စိတ်ကူးထားပါသေးတယ်။
စကားမစပ်ပြောရရင် ကျွန်တော်သီချင်းဆိုတာ အရမ်းဝါသနာပါပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့သိတာပေါ့ ဘုရားကျောင်းမှာ သီချင်းဆို နေကျမို့။ မြန်မာပြည်က မထွက်ခွာခင်မှာ ပရိုဂျူဆာတစ်ဦးရဲ့ စီစဉ်ပေးမှုနဲ့ ချစ်သူများနေ့စုံတွဲတေး အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုမှာ မဇမ်နူးနဲ့တွဲဆို ဖြစ်ပါတယ်။ အသံအားကောင်းတဲ့ သူမကတောင် ကျွန်တော့်အသံပါဝါကို ချီးကြူးသဘောကျကြတယ်။ ၀ါသနာအစပျိုးမိတော့လည်း ကနေဒါကို မသွားချင်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ပေါ်လာမိသေး။ ဒါပေမဲ့ ဘ၀ရှေ့ရေးခိုင်မာမှုဆိုတာ အရေးပါတယ်မဟုတ်လား။
ဒီမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြန်မာလူမျိုးကောင်လေးအချို့နှင့်တွေ့မိရတော့ မြန်မာပြည်မှာလမ်းခွဲခဲ့တဲ့ ချစ်ဦးသူကို သတိရမိသေး။ ရယ် တော့ရယ်စရာပါ.....တကယ်လို့ ကနေဒါမှာ အဆင်ပြေတဲ့အခါ သူ့ကိုစပွန်ဆာပေးပြီးခေါ်မယ် ဆိုတဲ့ စကားမှတ်ထားပြီး အခုအချိန် ကျတော့ ကျွန်တော့် G-talk ထဲ အကောင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ ၀င်ကာပြန်ချဉ်းကပ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတာ ရိပ်မိတော့ ပြန်ချစ် ပါရစေ အစ်ကိုရယ်တဲ့.....လေ။
ဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာမှာမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာမယ်။ မာမီတို့ကိုခေါ်ပြီး ထိုင်းကိုသွားလည်မယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်။ မိဘဆိုတာ ချစ်သူထက်ပို အရေးပါပါတယ်။ မာမီတို့စိတ်ချမ်းသာဖို့ ပိုအရေးကြီးတာပဲ။ မြန်မာပြည်ကမပြန်ခင်တော့ ညီလေးလည်း ကျွန်တော့်နောက်လိုက်လာနိုင် အောင် သင်တန်းတွေတက်ခိုင်းခဲ့မယ်။ စီစဉ်ပေးခဲ့မယ်လေ။
အိုး....ကျွန်တော့်အကြောင်းတွေကို ပြောပြမိတာက ခင်လို့ယုံကြည်လို့ပါ။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ခံစားရတာကို ရင်ဖွင့်တဲ့သဘောပါ။ အလုပ်သွားရတော့မယ်ဗျို့....နောက်မှဆက်ပြောကြတာပေါ့။
'Bye bye ....see you later'
Wrote by Alex Aung (18.2.2010)
I wish all of you will haveasweet Valentines with your beloved!
We laugh, we kiss, and we talk,
Posted by Alex Aung at 9:03 PM No comments:
Posted by Alex Aung at 6:31 PM No comments: